Baarlamaanka Sweden oo gudoomiye doortay iyo wasiirada oo jimcaha la soo magacaabayo | Somaliska
Baarlamaanka cusub ee Sweden ayaa maanta si rasmi ah u furmay, iyadoo ugu horayn lagu dhawaaqay magacyada dhamaan xildhibaanada cusub, ka dib baarlamaanka uu doortay gudoomiye cusub. Gudoomiyaha ayaa loo doortay Urban Ahlin oo ka tirsan xisbiga Socialdemokraterna (S) isagoo baarlamaanka ka tirsanaa ilaa sanadkii 1994. Baarlamaanka ayaa sidoo kale doortay sadex ku xigeen.
Waxaa ku xigeenka kowaad loo doortay wasiirkii hore ee Socdaalka Tobias Billström (M), iyadoo sidoo kale xisbiga SD ay soo bandhigeen Björn Söder in uu noqdo ku xigeenka labaad. Ku xigeenka sadexaad ayaa loo doortay Esabelle Dingizian (MP) oo ka tirsan xisbiga Miljöpartiet.
Doorashada gudoomiyaasha baarlamaanka Sweden ayaa sida caadiga ah aan ahayn arin xiiso leh, iyadoo aysan wax dood ah ka imaan jirin sanadihii hore balse sanadkaan ayaa maadaama xisbiga SD ay noqdeen kan sadexaad ee ugu weyn wadanka ay dalbadeen in la siiyo ku xigeenka labaad taasoo dood badan dhalisay. Xisbiyada inta badan ayaa isku raacay in SD la siiyo jagadaas balse xisbiga Vänsterpartiet (V) ayaa dalbaday in aan cunsuriyiinta waxba la siin oo si qarsoodi ah loo codeeyo. Iyadoo dhowr jeer codbixinta lagu celiyay oo markii sadexaad loo doortay Björn Söder in uu noqdo ku xigeenka labaad ee baarlamaanka, ninkaan ayaa ah nin lagu yaqaano cunsuriyad iyo Muslim naceyb.
Dhinaca kale, Stefan Löfven ayaa sheegay in uu maalinta jimcaha soo bandhigayo golihiisa wasiirada oo baarlamaanka la horkeeni doono.